Madaa Hin Qoorree Natti Hortee Sokkite - Xalayaa Jaalalaa
Namni jireenya isaa keessatti hin dogoggorre hin jiru. Haa ta’u malee, karaa nuyi itti dogoggorru Kan hunda keenyaa adda adda. Inni tokko dogoggora isaa irraa barata; inni tokko immoo dogoggora nama biraa irraa barata. Inni kaan immoo dogoggora isaa irraas haa ta’u; kan nama biraa irraas hin baratu. Inni akkasii rakkisaadha. Egaa “waa malee manni hin aaru” akkuma jedhan, anis waa malee kana hin dubbanne. Mee seenaa na mudate akka armaan gadiitti caqasaa!
Maqaan koo Roobsan jedhama. Barataa university kiiloo 6 ta’ee otuun jiruu mucayyoo maqaan ishee Caaltuu jedhamtu tokko wajjin wal jaallanne. Gosa barnoota adda addaa haa barannu iyyu malee, isheenis barattuuma university kiiloo 6 ti. Yeroo wal jaallachuu jalqabnu lachuu keenya iyyu barattoota university waggaa lammaffaati. Yeroo boqonnaa keenyatti waliin malee hin adeemnu. Mana kitaabaa yeroo deemnus waliin malee hin deemnu. Kan adda baanu yeroo manni barumsaa boqonnaaf cufatu qofa. Yeroo manni barumsaa cufatu isheenis, anis gara maatii keenyaatti galla. Yeroo boqonnaa kanatti qaamaan wal biraa haa dhibnu iyyu malee, karaa bilbilaa yeroo nuyi itti sagalee walii hin dhaga’iin oollee bulle hin jiru.
Otuma jaalala miyaa’aa kana keessa jirruu yeroon eebba keenyaa geenyaan lachuun keenya iyyu ni eebbifamne. Guyyaa eebba keenyaa kana gammachuunis gaddis nutti dhaga’amaa ture. Isa barannee barumsa keenya xumurru ni gammadna. Garuu, haalli hojii yokiin bakki ramaddii hojii lachuu keenya akka adda baasu ni beekna. Kanaafis gaddina. Eebba keenyaan booda carraan hojii anaan magaalaa Shaashomannee na qaqqabe. Caaltuu dhaan garuu, magaalaa Beddellee ishee ga’e. Otuu walitti boonyuu anis garan ramadametti, Caaltuu nis gara ramadamtetti imaala keenya eegalle.
Akkuman eebbifameen DV guuteen ture. Rabbi na gargaaree carraan DV kunis naaf ba’e. Yeroo carraan kun na ga’u Shaashomanneedhaan hojjedha. Bilbilaan haa ta’u iyyu malee Caaltuu koo waliin haaluma gaarii irra jirra. Garuu , carraan DV akka na qaqqabe itti hin himne. Keessi koo itti himu barbaada. Sammuun koo garuu na dide. Otuma Caaltuu tti hin himiin wanta na barbaachisu hunda xumuradheen gara USA tti imaale.
Akkuman biyya Amerikaa ga’een bilbileen Caaltuu tti hime. Isheenis dhageessee baayy’ee gaddite. Anis rakkoon hin jiru dhufeen si fudhadha jedhee, sossobadheen deebisee ofitti araarfadhe. Jaalalli keenya itti fufe; yeroodhaa gara yerootti waliif bilbilla.
Anis haalli naaf mijatee jireenya biyya Amerikaatti baruun jalqabe. Hojiis argadhee hojjechuun eegale. Facebook koo irraa bakka jireenyaa isa dur finfinnee jedhu sana gara USA ttin jijjiiradhe. Bakka babbareedaa deemee suura ka’een Facebook irratti maxxansuun jalqabe. Kanuma gidduutti intalli baayy’ee bareeddu Kan maqaan ishee Ayyaantuu jedhamtu tokko Facebook irratti hiriyyummaa naaf ergite. Anis hiriyyummaa ishee kana nan simadhe. Akkuman simadheen karaa keessaa na qunnamuu eegalte. Anis itti haasa’uun eegale. Ayyaantuun kan jiraattu magaalaa guddoo Oromiyaa, Finfinneedha. Ayyaantuu waliin haasoon keenya gara jaalalaatti jijjiiramuu eegale. Anis ishee jaallachuun eegale.
Yaadni koo hundi jaalala Ayyaantuun dhuunfatamaa dhufe; Caaltuu dhaaf immoo fedhii ani qabu hir’achaa dhufe. Yeroon boqonnaa argadhu hundatti mucayyoo karaa Facebook wal barre kana( Ayyaantuu) wajjin haasofna. Caaltuun garuu, “maal atoo natti jijjiiramaa dhuftee” jettee waan gaddite fakkaattee naaf barreessite. “Lakki jiruuma biyya ormaa kanati na ko’oomse” jedheen isheef deebise. Dubbii dhugaan garuu ko’oommadhee osoo hin taane, Ayyaantuu waliin jaalala jalqabeeni.
Jaalallee koo karaa Facebook wal barre kana(Ayyaantuu) waliin akka wal fuunu dubbanne. Gara biyyaa deemee akka cidha godhannus waliif galle. Kana hunda akkan duraan hiriyyaa qabu itti hin himne. Biyya galee fuudhuuf ergan murteessee booda, Caaltuu dhaan “Nan eegin, ani waanin deebi’ee biyya dhufu miti. Jireenyis ni cima waan ta’eef yeroo kee si jalaa gubuun gaarii miti. Kanaaf heerumi!” jedheen barreesseef. “Maaliif sin jaalladha jettee amma kana na sossobda? Iddoo garaa kee geessee akkas na jettaa?” Jette natti aarte. Garuu, ammayyu garaa koo keessa kan jiru Caaltuudha. Anis, isa yaadni garaa koo jedhu dhaga’uu dhiiseen sammuu koo duukaa bu’e. Kanumaan Caaltuu waliin wal lollee adda baane.
Guyyaan geenyaan anis biyya galeen jaalallee koo karaa Facebook wal barre kana(Ayyaantuu) waliin magaalaa Finfinneetti cidha godhanne. Cidha kana irratti maallaqa guddaan baase. Cidhi keenyas baayy’ee bareedaa ture. Cidha keenyaan boodas iddoo garaa garaa deemnee waliin bashannanne. Baatii lamaaf ergan ishee waliin turee booda gara Amerikaattin deebi’e; hojii koos nan eegale.
Maallaqa ji’a ji’aan $200 hanga $300 ttin isheef erguu eegale. Asii takka qorra keessa takka ho’a akka abiddaa nama gubu keessa asiif achi fiigeen biyyatti ishee bashannansiisaa ture. Maallaqa ani ji’aan itti ergu kana lafa isheen dhaqattu hin beeku, otuu baatii hin guutiin “qarshiin fixe” na jetti.
Akka isheen biyya Amerikaa dhuftuuf wantota barbaachisan hunda guuteen galche. Haa ta’u malee dhimmi keenya kun nu jalaa turee waggaa sadaffaa nuyi wal fuunetti ‘Visa’ isheef ergan. Haadha manaa koo kana otuu hin argiin waggaa sadiin ture. Isa Visan isheef dhufe anis baayy’ee gammadeen dafee tikkeettii kutee isheef erge. Isheenis ni dhufte. Dhufaatii ishee kana irrattis sagantaa guddaa qopheessinee seeran ishee simanne. Gammachuu guddaattis natti dhaga’ame.
Haa ta’u malee, gammachuun koo guddaa kun guyyaa shanii booda gara gaddaa fi boo’ichaatti jijjiirame. Guyyaa afur erga waliin boqonnee booda gaafa guyyaa shanaffaa ani gara hojiin deeme. Ayyaantuun ganamaan kaatee ciree koo naaf qopheessitee na dhungattee “sin jaalladha” jettee na geggeessite. Dhungoon ishee sun lakkaa dhungoo Yihudaan Yesuus Kiristoosiin dhungate ture. Yeroo ani hojii kootii gara manaatti deebi’u, Ayyaantuu koo mitii fooliin ishee iyyu mana keessa hin jiru. Uffata ishee ilaallaan, borsaa ishee ilaallaan waan tokko iyyu mana keessa hin jiru. “Gara magaalaa biraa deemeera; nan barbaadiin, ani ulfa ji’a sadiiti” Kan jedhu waraqaa irratti barreessitee siree irra keessee deemte. Sammuun koo amanuu hin dandeenye. Baatii afur booda suura ishee Facebook irratti maxxansite. Dhugumayyu Ayyaantuun garaan guddattee da’uu geesseetti.
Guyyaan natti dukkanaa’e, halkanis naaf bari’uu dide. Waanin godhus nan wallaale. Ani haadha manaa koo jedheen ishee eega. Isheen garuu nama biraaf ulfooftee ulfa baatii sadii baattee naaf dhufte. Ayyaantuun madaa hin qoorre natti hortee sokkite. Cubbuu ani Caaltuu irratti hojjedheti naaf deebi’e. Wanta keessi ofii namaan jedhu dhaga’uu dhiisuun boolla qilee keessa nama buusa. “Ana ilaalaa hanna dhiisaa” jedhe namichi dubbii isaa. Dogoggora koo kana irraa akka barattaniifan seenaa koo kana isiniif qoode. Wanta akkasii irraa isin haa baraaru.
Ni barsiisa kan irra barachuu barbaaduuf .dhugaadha wanti akkasii Ni mullata garuu kan keenya irraa hin barannu.galatooma.
“walallaan of jalatti beekan baargamatti” akkuma jedhamu nama qaaman sirritti beektuu jaalachuu dhiistee, kan fageenyaan Suura fi Iddoon adda baasani jaalachuun bu’aa isaa miidhadha.
garii dhalotaf haa darbu
Anaanuu Na Qunname Beeka, Facebook Dhaan Naafa Waliin Jaalala Eegeleen Ture Garuu….
Galaatomii senaa koo wajjiin waal fakkati dhugaa
qoricha batani qoricha hin barbaadan jedhu
qoricha bataani qoricha hin barbaadan
Engida Tefera Mojoo
baay`ee namatii tolaa fayyaa nuuf ta`aa artistoonni orommoo hundii.
abeel tamasgeen xiiqii
bayee galatomi erga barumsa gudda kennu dha
Dhugaadha Kun Baay’ee Rakkisadha.